Imigaqo enxulumene nebhodi yesekethe eguqukayo yeFPC - IPrototype yohlobo lwePBP, Ubumba, uMzi-mveliso, uMthengisi, uMvelisi
» Ibhlogi » Imigaqo enxulumene nebhodi yesekethe eguqukayo yeFPC
Imigaqo enxulumene nebhodi yesekethe eguqukayo yeFPC
I-FPC isetyenziswa ikakhulu kwiimveliso ezininzi ezinje ngeefowuni eziphathwayo, iilaptops, ii-PDAs, iikhamera zedijithali, i-LCMS, njl. Nantsi eminye imigaqo eqhelekileyo ye-FPC.
1. Umngxuma wokungena (ngomngxuma, umngxunya ongezantsi)
Ihlala ibhekisa kwisigqubuthelo (ngomngxunya oza kutyatyulwa kuqala) kumphezulu webhodi eguqukayo, esetyenziselwa ukulungelelana nomphezulu wesekethe webhodi eguqukayo njengefilimu yokulwa ne-welding. Nangona kunjalo, umngxuma womngxunya wodonga lomngxunya okanye ipeyinti yokuwelda yesikwere efunekayo ukuze iwelding kufuneka ivezwe ngabom ukuququzelela ukuwelda iinxalenye. Oko kubizwa ngokuba “ngumngxuma wokungena” ekuqaleni kuthetha ukuba umaleko womphezulu unomngxunya wokudlula, ukuze umhlaba wangaphandle “ukwazi” ukusondela kumxube weplate phantsi komaleko wokukhusela umphezulu. Ezinye iibhodi ze-multilayer nazo zinemingxunya ebonakalayo.
Yaziwa njenge-resin ye-polyacrylic acid. Uninzi lweebhodi eziguqukayo zisebenzisa ifilimu njengefilimu elandelayo.
3. Ukuncamathela okanye ukunamathela
A into, ezifana nentlaka okanye ukutyabeka, leyo eyenza ujongano ezimbini ukugqibezela nisondelelane.
4. I-Anchorage spurs claw
Kwipleyiti esembindini okanye ipaneli enye, ukwenzela ukuba umngxunya wokufaka iwelding pad ubambelele ngakumbi kumgangatho wepleyiti, iminwe emininzi inokuqhotyoshelwa kwisithuba esigqithileyo ngaphandle kwendandatho yomngxunya ukwenza umngxunya womngxunya uhlanganiswe ngakumbi, ukunciphisa ithuba lokudada ngaphezulu kweplate.
Njengolunye lweempawu zebhodi eguqukayo eguqukayo, umzekelo, umgangatho webhodi eguqukayo edityaniswe kwiintloko ezishicilelweyo zediski yediski yekhompyuter iya kufikelela “kuvavanyo lokugoba” lwezihlandlo eziliwaka lezigidi.
6. Umaleko wokudibanisa umaleko wokubopha
Ihlala ibhekisa kumaleko wokuncamathela phakathi kwephepha lobhedu kunye ne-polyimide (PI) substrate yomaleko wefilimu webhodi ye-multilayer, okanye itape ye-TAB, okanye ipleyiti yebhodi eguqukayo.
7. Isigqubuthelo / ingubo yokwaleka
Kwisekethe engaphandle yebhodi eguqukayo, ipeyinti eluhlaza esetyenzisiweyo kwibhodi enzima akukho lula ukuba ingasetyenziselwa i-anti welding, kuba isenokuwa ngexesha lokugoba. Kuyimfuneko ukusebenzisa umaleko othambileyo “we-acrylic” elaminethiweyo kumphezulu webhodi, ongasetyenziswanga njengefilimu ye-anti welding, kodwa nokukhusela isekethe engaphandle, kunye nokwenza ukuba ukuxhathisa nokuqina kwebhodi ethambileyo. Lo “mboniso wangaphandle” ukhethekileyo ubizwa ngokuba ngumaleko wokukhusela umphezulu okanye ukhuseleko.
8. Dynamic flex (FPC) ibhodi eguqukayo
Ibhekisa kwibhodi yesekethe eguqukayo ekufuneka isetyenziselwe intshukumo eqhubekayo, enje ngebhodi eguqukayo kwintloko yokubhala yediski yediski. Ukongeza, kukho “i-static FPC”, ebhekisa kwibhodi eguqukayo engasasebenziyo emva kokuba ihlanganiswe ngokufanelekileyo.
9. Ukuncamathela kwifilimu
Ibhekisa kumaleko wokubopha olaminethiweyo owomileyo, onokuthi ubandakanye ifilimu yokuqinisa ilaphu lefayibha, okanye umaleko omncinci wezinto zokubambelela ngaphandle kokuqinisa izinto, ezinje ngomaleko wokubopha we-FPC.
I-Flexible circuit eprintiweyo, i-FPC ibhodi eguqukayo
Ibhodi yesekethe ekhethekileyo, enokutshintsha ukumila kwendawo enamacala amathathu ngexesha lendibano esezantsi. I-substrate yayo iguquguqukayo ye-polyimide (PI) okanye ipholiyesta (PE). Njengebhodi elukhuni, ibhodi ethambileyo inokuthi yenze umngxunya kwimingxunya okanye iipads zokuncamathela komphezulu ngokufaka umngxunya okanye ukufakelwa kokuncamathela komphezulu. Umphezulu webhodi unokuqhotyoshelwa kunye nophahla oluthambileyo lokuzikhusela kunye neentsimbi ezichasayo, okanye uprintwe ngepeyinti eluhlaza ethambileyo.
11. Ukungaphumeleli kwe-Flexure
Izinto (ipleyiti) yaphukile okanye yonakele ngenxa yokuguqa nokuphinda-phinda okuphindaphindiweyo, okubizwa ngokuba kukungaphumeleli kokuguquguquka.
12. Kapton polyamide izinto ezithambileyo
Eli ligama lorhwebo leemveliso zeDuPont. Luhlobo lwe “polyimide” sheet eligquma izinto ezithambileyo. Emva kokuncamathisela ifoyile yekhalenda esekhalendeni okanye ifoyile yobhedu eyonyuliweyo, inokwenziwa kwiziseko zepleyiti ebhetyebhetye (FPC).
13. Ukutshintsha inwebu
Ngefilimu ye-Mylar evulekileyo njengomntu ophetheyo, uncamathiso lwesilivere (uncamathisela isilivere okanye uncamathisela isilivere) iprintwe kwisekethe engqindilili yefilimu ngendlela yokushicilela kwescreen, emva koko idityaniswe negasket egingxiweyo kunye nepaneli ebonakalayo okanye i-PCB ukuze ibe siswitshi se “touch” okanye ikhibhodi. Esi sixhobo sincinci sisetyenziswa kakhulu kwiikhalityhuleyitha eziphethwe ngesandla, kwizichazi-magama nakwizilawuli kude zezinye izixhobo zombane. Ibizwa ngokuba yi “membrane switch”.
14. Iifilimu zePolyester
Ebhekiswa njengephepha le-PET, imveliso eqhelekileyo yeDuPont ziifilimu zeMylar, ezizinto ezinamandla okumelana nombane. Kwishishini lebhodi yesekethe, umaleko okhuselayo ongafihlisiyo kumfanekiso wefilimu owomileyo kunye nesembozo sobungqina kumgangatho we-FPC ziifilimu ze-PET, kwaye zinokusetyenziswa njenge-substrate yesilivere yokuncamathelisa isekethe yefilimu. Kwamanye amashishini, anokusetyenziswa njengobushushu beentambo, abaguquli, iikhoyili okanye ukugcinwa kweetyhubhu kwii-ICs ezininzi.
15. IPolyimide (PI) i-polyamide
Yeyona resin intle ipholishwe yi-bismaleimide kunye ne-aromaticdiamine. Yaziwa ngokuba yi-kerimid 601, imveliso eyenziwe ngomgubo osasazwa yinkampani yaseFrance ethi “Rhone Poulenc”. UDuPont wayenza iphepha elibizwa ngokuba yiKapton. Le pi ipleyiti inokumelana nobushushu obugqwesileyo kunye nokuxhathisa kombane. Ayisiyonto nje ekrwada ebalulekileyo ye-FPC kunye netab, kodwa ikwacwecwe elibalulekileyo lebhodi yomkhosi onzima kunye nebhodi yomama ebalaseleyo. Inguqulelo yelizwekazi yile “polyamide”.
16. Reel ukwenza umsebenzi onxibelelanayo
Amanye amalungu e-elektroniki kunye nezinto ezinokuveliswa yinkqubo yokurhoxisa kunye nokurhoxisa (i-disc), enje ngethebhu, isikhokelo esikhokelayo se-IC, ezinye iibhodi eziguqukayo (FPC), njl. bagqibe ukusebenza kwabo kwi-intanethi ngokuzenzekelayo, ukonga ixesha kunye neendleko zomsebenzi wento enye.
Category Ibhlogi (676) Ulwazi lweNkampani (2) Imveliso (112) FR-4 PCB (21) I-HDI PCB (14) Isantya esiphezulu sePCB (5) IC Inkqutyana (13) BGA (6) MMc (1) Mini ye-LED (2) SiP (1) IBhodi yovavanyo (4) Imicrowave PCB (29) Ukuhamba rhoqo kwePCB (26) Rogers PCB (18) I-Taconic PCB (1) ITelfon PCB (5) Uluhlu oluninzi lwePCB (18) Indibano yePCB (12) Esiqinileyo Flex PCB (15) IPCB ekhethekileyo (11)